“ အကျပ်အတည်းအမျိုးသားရေးဝါဒ” ၏ဗိုင်းရပ်စ် - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign
[၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁] ဆရာတော် Desmond Tutu ကို ကိုးကွယ်ပါ။ သတင်းနှင့်အထူးများ
ဧပြီလ 1, 2020 အင်္ဂါရပ်များ, သဘော 0
COVID-19 ကဲ့သို့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများအားအမျိုးသားရေးဝါဒတုံ့ပြန်မှုများကိုဖြေရှင်းရာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားပညာရေးသည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သနည်း။
Werner Wintersteiner အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
"သဘာဝတရားအပေါ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ? ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သဘောသဘာဝကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးပါ၊ အရူးအမူးကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ချုပ်တည်းမှုပျောက်ဆုံးသွားချိန်တွင်သဘာဝကိုထိန်းချုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ […] ဗိုင်းရပ်စ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချထားသော၊ အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်သောဗိုင်းရပ်စ်အသစ်များရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကာအကွယ်မဲ့သူများဖြစ်ကြသည်။ ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ပတ်သက်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ရှိ၊ -Edgar Morin1
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ကညီညွတ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းသွားမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာချီစည်းလုံးညီညွတ်မှုလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းကြမလား။ ” - Yuval နော Har ဟာရီ2
Corona အကျပ်အတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာ့အခြေအနေကိုပြနေသည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်အပြန်အလှန်မှီခိုမှုမရှိဘဲအပြန်အလှန်မှီခိုမှုမရှိကြောင်းပြသသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေပြီး၎င်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်မှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အားထုတ်မှုများလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ပြည်နယ်များအမျိုးသားရေးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရူပါရုံကိုတုံ့ပြန်။ ဤတွင် (အမျိုးသားရေးဝါဒီ) အတွေးအခေါ်သည်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်အောင်ပွဲခံသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးမူဝါဒအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ မိမိကိုယ်ကိုကြေငြာထားသော“ ငြိမ်းချမ်းရေးပါ ၀ င်မှုဥရောပ” ဥရောပသမဂ္ဂ၌ပင်ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှု ဟူ၍ မရှိပါ။ သြစတြီးယားစာနယ်ဇင်းသမား Raimund Löwက“ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာအမျိုးသားရေးဝါဒကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။3
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုရှုထောင့်သည်ကမ္ဘာ့အကျပ်အတည်းနှင့်သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည်တည်ရှိမှုမရှိသည့်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသော“ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုထောင့်” ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်“ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာအမျိုးသားရေးဝါဒ” (Ulrich Beck) ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အနည်းဆုံးအမြင်တွင်အမျိုးသားရေးဝါဒ၊ ပြဿနာ။ တရားစီရင်ခြင်းနှင့်စီရင်ခြင်းတို့တွင်“ အမေရိကပထမ၊ ဥရောပပထမ၊ သြစတြီးယားပထမ” (စသည်ဖြင့်) ၏သဘောထားကိုစွန့်လွှတ်ရန်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုလမ်းညွှန်နိယာမအဖြစ်ချမှတ်ရန်လည်းဆိုလိုသည်။ မေးစရာများလွန်းသလား ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တစ်နိုင်ငံတည်းအနေဖြင့်၊ ပြည်နယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တိုက်ကြီးတစ်တိုက်အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမကယ်တင်နိူင်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု မှလွဲ၍ အခြားအရာမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးတည်ဆောက်ပုံများကိုလိုအပ်သည်။
ဤတူညီသည့်တုံ့ပြန်မှုများကိုတွန်းလှန်ရန်ဘယ်သောအခါမျှမလွယ်ကူကြောင်းပြဇာတ်တွင်ကောင်းစွာဖော်ပြထားသည် Der Weltuntergang (ကမ္ဘာ၏အဆုံး) (1936) သြစတြီးယားကဗျာဆရာ Jura Soyfer က။ အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒမြင့်တက်မှုနောက်ခံတွင်သူသည်လူသားမျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ် - အကြွင်းမဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုမြင်ကွင်းကိုရေးဆွဲသည်။ ဒါပေမယ့်လူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြတာလဲ။ အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပထမတုံ့ပြန်မှုသည်ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့နောက်ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင် (အဓိပ္ပာယ်မရှိသလောက်) တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုမည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်မဆိုလိုက်ပါ။4 ပထမ ဦး စွာနိုင်ငံရေးသမားများသိပ္ပံပညာ၏သတိပေးချက်များကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ကပ်ဆိုးကြီးကသံသယဖြစ်ဖွယ်ချဉ်းကပ်လာတာနဲ့အမျှစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုမတွေ့ရဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံးအတူတကွကြုံတွေ့ရမယ့်အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်။ မပြည်နယ်များအကြား, မတစ် ဦး ချင်းစီလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း။ ယင်းအစား၊ အချမ်းသာဆုံးသောချည်နှောင်ခြင်းကိုထုတ်ပေးခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကိုကယ်တင်ရန်ဈေးကြီးသောအာကာသယာဉ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်အချမ်းသာဆုံးတစ်ဖန်အခြေအနေမှအကျိုးအမြတ်ရရှိသည်။ အမှန်မှာပျက်စီးခြင်းကိုအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုတည်းကသာဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ကမ္ဘာမြေကိုဖျက်ဆီးရန်စေလွှတ်သည့်ကြယ်တံခွန်သည်၎င်းကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး၎င်းကိုနှမြောသည်။ အဆိုပါပြဇာတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းလုံးညီညွတ်မှုမှသွယ်ဝိုက်ပေမယ့်အလွန်အရေးတကြီးအယူခံဝင်သည်။
ဒီနေ့အချိန်မှာတော့လုံးဝကွဲပြားခြားနားနေပြီ။ COVID-19 အကျပ်အတည်းသည်ကမ္ဘာကြီးအတွက်အဆုံးမဟုတ်ပါ။ အစိုးရအများစုသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုနှေးကွေးစေရန်ယခုအခါတန်ပြန်အင်အားသုံးမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်သည့်အထိကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ပြီးတော့သြစတြီးယားမှာလည်းလူမှုရေးအရရောမျိုးဆက်တွေရဲ့သက်ရောက်မှုကိုပါလျော့ပါးစေဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့သောထူးကဲသောအခြေအနေမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာတွင်လုံး ၀ မပါဝင်သင့်ပါ။ ယခင်ကထက် ပို၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေဖန်လေ့လာခြင်းနှင့်ဝေဖန်စဉ်းစားခြင်းလိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်ပုံမှန်အတိုင်းမဖြစ်နိုင်သည့်အခြေခံအခွင့်အရေးများကိုရုတ်တရက်ကန့်သတ်စေသည်။
သို့သော်အထူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့သောထူးကဲသောအခြေအနေမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာတွင်လုံး ၀ မပါဝင်သင့်ပါ။ ယခင်ကထက် ပို၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေဖန်လေ့လာခြင်းနှင့်ဝေဖန်စဉ်းစားခြင်းလိုအပ်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုဤသို့မေးနိုင်သည်။ ဥပမာ - Jura Soyfer ၏ပြဇာတ်နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသလား။ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းမှကဗျာဆရာဖော်ပြသည့်အပြုအမူ - ငြင်းပယ်မှု၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနှိမ်နင်းနိုင်သည့်အမှားများသည်လက်ရှိအကျပ်အတည်းတွင်ထပ်ခါတလဲလဲမဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နေသလဲ။ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ - ငါတို့ရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုအများကကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့“ သာမန်ကမ္ဘာမြေကံကြမ္မာ” ကဘယ်မှာလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ဟာပြဇာတ်ရုံပြဇာတ်ရုံနဲ့လုံးဝမတူတာကငါတို့ကိုဘယ်နိမိတ်မှကယ်တင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကျဉ်းမြောင်းသော (အမျိုးသားအဆင့်သို့မဟုတ် Eurocentric) ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရူပါရုံ၏ဆိုးကျိုးများကိုယခုဥပမာအနည်းငယ်ဖြင့်ပြသပါလိမ့်မည်။
အမြင် - တရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်လား။
ကျဉ်းမြောင်းသောအမြင်ရှိပြီးသားပြtheနာ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုတိမ်တိုက်။ ရက်သတ္တပတ်များစွာအနေဖြင့်လပေါင်းများစွာကြာသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် Corona ကပ်ရောဂါကိုတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရံအဖြစ်သာသက်ရောက်မှုရှိသောတရုတ်ကိစ္စအဖြစ်မှပယ်ချလိုက်သည်။ (ဟုတ်ပါတယ်၊ တရုတ်အစိုးရရဲ့ကန ဦး ဖုံးကွယ်မှုကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းဒီကိစ္စကိုအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်) ယခုသီတင်းပတ် Trump က "တရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်" အကြောင်းကိုတိတိကျကျပြောခဲ့သည်။ ၎င်းကို "နိုင်ငံခြားဗိုင်းရပ်စ်" ဟုမူလကခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။5 ပြီးတော့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက်ပထမဆုံး“ ရှင်းလင်းချက်” - တရုတ်တို့၏သံသယဖြစ်ဖွယ်အစာစားခြင်းအလေ့အထနှင့်တောရိုင်းစျေးကွက်များ၌သန့်ရှင်းမှုအခြေအနေများကိုသတိရကြပါစို့။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများကိုလည်းလျစ်လျူရှု။ မရပါ။ ကူးစက်ရောဂါသည်အီတလီသို့ပျံ့နှံ့သွားမှသာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်ကုန်သွယ်ရေးဆက်သွယ်မှုများ၊ ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်များနှင့်အရင်းအနှီးစီးဆင်းမှုသာမကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများသာမကရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်မှီခိုမှုကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရမိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့စက်ရုံမွေးမြူရေးနည်းစနစ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကပ်ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးပtalkedိဇီဝဆေးများဘက်တီးရီးယားကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုလိုပါ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုတိုးပွားစေသည်။
လှုပ်ရှားမှု - အဖြေတစ်ခုအနေဖြင့်“ လူတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုအတွက်” ။
Corona သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရာသီဥတုအကျပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ အကျပ်အတည်းတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိယာမအားဖြင့်တုန့်ပြန်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကအခြားယန္တရားများကိုမတည်ထောင်ခဲ့ပါကဆောင်ပုဒ်အရမဟုတ်ဘဲ“ အတူတကွတွယ်ကပ်” သည်မဟုတ်ဘဲ“ လူတိုင်းအတွက်မိမိကိုယ်ကို” ဟုအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါကြောင့်ပြည်နယ်အများစုကနယ်စပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာ Corona ပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးသောအစီအမံအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကိုနိုင်ငံအဆင့်တွင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအခြားမည်သည့်ကိရိယာများမှမရှိသောကြောင့်နယ်စပ်ပိတ်ပစ်ခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သော်လည်းအမှန်တရားတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ။ ခြုံငုံ။ နယ်စပ်ပိတ်ထားမည့်အစားဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများအားသီးခြားခွဲထားခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပေါ် အခြေခံ၍ သာဆိုလိုခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာနယ်စပ်ဒေသများရှိလိုအပ်သည့်နေရာများတွင်သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းသည် ပို၍ ပညာရှိရာကျမည်မဟုတ်လော။ ဤအချက်သည်လက်ရှိတွင်မဖြစ်နိုင်ဟူသောအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာစနစ်သည်မည်မျှမစုံလင်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖန်တီးခဲ့ကြပေမယ့်ငါတို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များအတွက်ယန္တရားများကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ရှိသော်လည်းအရည်အချင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး ၂၀% မျှသာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှငွေကြေးထောက်ပံ့ထားခြင်းကြောင့်ထို့ကြောင့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများအပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်များအပေါ်မှီခိုနေရသည်။ Corona အကျပ်အတည်းတွင်ယနေ့အထိ၎င်း၏အခန်းကဏ္ controvers သည်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတောင်မှဥရောပ၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိမဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခဲ့ကြပါ။ ကနျြးမာရေးမူဝါဒသည်အမျိုးသားရေးအရည်အချင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်မွေးစားခဲ့သောဥရောပသမဂ္ဂ၏လူထုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယန္တရားအတွက်မည်သည့်သင့်လျော်သောအဆောက်အအုံများမှမဖန်တီးခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်“ ဒုက္ခသည်အကျပ်အတည်း” နှင့်နယ်နိမိတ်များကိုပိတ်ပစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်နေကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုအသုံးပြုသောလူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။
အဆိုပါ (အမျိုးသား) အတ္တပို။ ပင်တတ်၏။ အထူးဥပမာတစ်ခုမှာသြစတြီးယားရှိ Tyrolean ဆောင်းရာသီအားကစားဒေသများဖြစ်သည်။ Tyrolean ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များနှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းသည်နိုင်ငံတကာစကိတ်စီးကူးစက်မှုများစွာအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ အရေးပေါ်ဆရာဝန်များ၊ အိုက်စလန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များနှင့် Robert Koch Institute တို့မှသတိပေးချက်များရှိသော်လည်းနှင်းလျှောစီးခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပစ်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ the ည့်သည်များလည်းအထီးကျန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဤအတောအတွင်းတရားရုံးများအမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ “ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို Tyrol ကနေကမ္ဘာကိုကူးယူထားသူရဲ့မျက်စိနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ဒါကို ၀ န်ခံပြီးတောင်းပန်တာကနောက်ကျသွားမှာပါ” ဟုအင်းစဘွတ်ခ်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ကမှန်ကန်စွာပြောကြားခဲ့သည်။6 ထို့ကြောင့်သူသည်သြစတြီးယား၏နိုင်ငံတကာတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်ကမ္ဘာချီစည်းလုံးညီညွတ်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အနည်းငယ်သောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သြစတြီးယားတွင်မျှဝေထားသောအမျိုးသားအထီးကျန်မှု၏ဤသဘောထားအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ၂၀၂၀ မတ်လလယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအကျပ်အတည်းကာလများအတွင်းထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့သည် - ဆန္ဒပြမှုများအပြီးတွင်ဖယ်ရှားခဲ့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုဂျာမန်တင်ပို့မှုတားမြစ်ခြင်း၊ သြစတြီးယားသို့တင်သွင်းခံရခြင်းမှပစ္စည်းများအတွက်ပေးဆောင်။7 ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသည်အီးယူ (အိမ်နီးချင်း) နိုင်ငံများမှစောင့်ရှောက်သူများအပေါ်မှီခိုသောသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ဖျားနာသူများအတွက်အိမ်စောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေဖြစ်သည်။ သို့သော်နယ်နိမိတ်ပိတ်ပစ်မှုများကြောင့်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်တာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဥရောပသမဂ္ဂသည်အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသမှုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်၊ အနည်းဆုံးဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရှိဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကုန်သွယ်မှုကိုတဖန်ပြန်လည်လွတ်မြောက်စေခဲ့သည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်ပြည်ထောင်စုမှတင်ပို့မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။8။ သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလား။ ဖြစ်ကောင်း။ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ဥရောပ၏အတ္တဝါဒထက်အမျိုးသားရေးသဘောတရားမဟုတ်ပေလော။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် Corona ကြောင့်အာဖရိကကိုပိုမိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်သည့်အခါမှသာပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။
ဥရောပစည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်းသည်အီတလီကိုအဆိုးရွားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏နိုင်ငံများသည်အီတလီထက်နောက်ပိုင်းတွင်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့သော်လည်းအရှည်ဆုံးကာလများ၌သူတို့နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ “ ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအီတလီကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ။ တာ ၀ န်ယူမှုကိုရှက်ဖွယ်ကောင်းသောစွပ်စွဲချက်ဖြင့်ဥရောပသမဂ္ဂရှိအခြားနိုင်ငံများကရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွင်းအီတလီသို့ဆေးကုသမှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီယူအက်စ်အေမှလည်းအီတလီနိုင်ငံ၏အကူအညီတောင်းခံမှုကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်ဟုမဖော်ပြဘဲ9 အခြားတစ်ဖက်တွင်မူတရုတ်၊ ရုရှားနှင့်ကျူးဘားတို့သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပေးပို့ခဲ့သည်။ ဥရောပသည်အီးယူမှတစ် ဦး တည်းကျန်ခဲ့သည့်ဆားဘီးယားကဲ့သို့သောဥရောပနိုင်ငံများကိုလည်းထောက်ခံသည်။ အချို့သောမီဒီယာများက၎င်းကိုတရုတ်အာဏာနိုင်ငံရေးဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။10 ဖြစ်နိုင်သည်မှာဥရောပသမဂ္ဂသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုကူညီရန်၎င်း၏စွမ်းအား၌သာရှိသည်။
Brexit သည်အပြည့်အဝမပြီးသေးသေးသဖြင့်အိုင်ယာလန်ကျွန်းပေါ်တွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအခြေအနေပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ သမ္မတနှင့်ဗြိတိန်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်တို့အကြားနယ်နိမိတ်သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်သိသိသာသာမဖြစ်နိုင်ပါ။ Corona နှင့်အတူ, ဒီပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဗြိတိန် ၀ န်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်သည်အီးယူနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတင်းကျပ်စွာကန့်သတ်ထားသည်မှာခေတ္တမျှသာရှိသေးသည်မှာကြာရှည်စွာ (“ နွားကာကွယ်မှုကင်းစင်ခြင်း” သဘောတရား) ကိုမြောက်အိုင်ယာလန်တွင်ပင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ဤအချက်ကသြစတြီးယားရေဒီယို (ORF) သတင်းထောက်ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်ပေးရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည် -“ နောက်တစ်ခါကတော့ခင်ဗျားကဗြိတိသျှလူမျိုးဘယ်လောက်ပြသလဲဆိုတာကိုပြတာပါ။ […]” coronavirus နှင့်အတူဝိသေသလက္ခဏာသည်ပထဝီအနေအထားထက်သာလွန်ပုံရသည်။ ကလေးများကျောင်းသွားသည်၊ မသွားသည်ကိုမမြင်ရသောနယ်စပ်တွင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်မှာထူးဆန်းသည်။11
လျစ်လျူရှု - ဒုက္ခသည်အကြောင်းနောက်ထပ်ဘယ်သူပြောတာလဲ။
သြစတြီးယားအစိုးရမှပြုလုပ်သောမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိမဆိုလက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအဆင်းရဲဆုံးနှင့်မတရားဆုံးသူများ - ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရှိဒုက္ခသည်ရပ်ကွက်များတွင်နေထိုင်သော၊ တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ကန့်သတ်ထားသည့်နေရာများတွင်နေထိုင်သူများကိုဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသည်။ နှင့်ရောဂါကူးစက်ခံရလျှင်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်မည့်သူများ။ မီဒီယာအစီရင်ခံချက်များတွင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့်ပြောင်းရွှေ့အခြေချမှုသည်နောက်ခံကျဆင်းခဲ့သည်။ Lesbos ကျွန်းပေါ်ရှိဒုက္ခသည်များ၏ဒုက္ခများ - အီးယူအတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်အလွန်အလုပ်များနေသောကြောင့်နေ့စဉ်သတင်းမှထုတ်ပယ်ခံရပုံရသည်။ အဖော်မရှိလူငယ်များနှင့်မိသားစုများကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သောဂျာမနီကဲ့သို့သောနိုင်ငံများကစီမံကိန်းကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့သြစတြီးယားကဒီအစီအစဉ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ၀ င်ချင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဂရိနိုင်ငံရှိဒုက္ခသည်စခန်းများအားကယ်ဆယ်ရန်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီနှင့်ဥရောပလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏အရေးတကြီးတောင်းဆိုချက်ကိုယခုအချိန်အထိမကြားနိုင်သေးပါ။12 အကျပ်အတည်းကာလတွင်အမျိုးသားအတ္တစိတ်သည်ဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စာရေးသူ Dominik Barta သည် Corona အကျပ်အတည်းဖြစ်ပွားမှုအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်လက်တွေ့တွင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုရှင်းလင်းစွာပြသသည်။
“ Coronavirus သေတဲ့မီလန်နိုင်ငံသားဟာသူ့နိုင်ငံမှာသေနေတဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာနေပြီးသူနဲ့အီတလီစကားပြောနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသေဆုံးနေတယ်။ သူကသူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံနှင့်သူ၏မိသားစုအားဖြင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းလိမ့်မည်။ Lesbos ရှိဒုက္ခသည်သည်ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ဖူးခြင်းမရှိဘဲသေဆုံးသွားလိမ့်မည်။ သူ၏မိသားစုနှင့်မဝေးပါကသူတို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းသူသေလိမ့်မည်။ ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမှစခန်းမှခေါ်ဆောင်သွားခံရမည့်အမည်မသိသေကောင်။ ဆီးရီးယားသို့မဟုတ်ကဒ်၊ အာဖဂန်၊ ပါကစ္စတန်သို့မဟုတ်ဆိုမာလီဒုက္ခသည်သည်သူသေဆုံးပြီးနောက်အလောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ လုံးဝဖြစ်ခဲ့လျှင်သူသည်အမည်မသိစာရင်းဇယားများတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ […] ကျွန်ုပ်တို့ဥရောပသားများ၊ အထူးသဖြင့်အကျပ်အတည်းကာလများ၌လုံး ၀ ကင်းမဲ့သောတည်ရှိမှုအရှုပ်တော်ပုံကိုခံစားမိပါသလား။13
Corona ကိုဆန့်ကျင်တဲ့“ စစ်” လား။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအစိုးရများသည် coronavirus အပေါ်စစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်၏ကြွေးကြော်သံဖြင့်တရုတ်ကအစပြုခဲ့သည်၊ “ ပါတီ၏အလံသည်စစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းတွင်မြင့်တက်သွားစေ”14 နောက်ထပ်နမူနာအချို့ -“ တောင်ကိုရီးယားသည် coronavirus အပေါ် 'စစ်ပွဲ' ကြေညာခဲ့သည်။ "အစ္စရေး Coronavirus နှင့် Quarantines Vis ည့်သည်များအပေါ်စစ်ဆင်နွှဲ"; “ Coronavirus ဆန့်ကျင်ရေး Trump တိုက်ခိုက်မှု” သည်စသည်တို့နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှသမ္မတ Macron -“ ကျနော်တို့စစ်ဖြစ်နေပြီ၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဖြစ်တယ်။ ... ] ပြီးတော့ငါတို့စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အခုမှစပြီးအစိုးရနဲ့ပါလီမန်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆီသို့ ဦး တည်သွားရမယ်။ "15 ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပင်ဤဝေါဟာရကိုအခြေအနေ၏လေးနက်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန်အသုံးပြုသင့်သည်ဟုယုံကြည်သည်။16
ဤစစ်တပ်အသုံးချမှုသည်အကြောင်းရင်းနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီသောရောဂါ - ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး - မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိသည်။ တဖကျတှငျ, အရပ်ဘက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့အကြီးအကျယ်အစီအမံများအတွက်လူမှုရေးလက်ခံမှုတိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ စစ်ပွဲမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုလက်ခံရမယ်။ ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဗိုင်းရပ်စ်ကိုတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေမှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ပွဲတွေကသူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ပဲ။ “ ငါတို့အနိုင်ရလိမ့်မယ်၊ ငါတို့လည်းအရင်ကထက်ကိုယ်ကျင့်တရားပိုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်” ဟုမက်ခရွန်ကသူ၏လူမှုရေးပေါ်လစီကြောင့်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဖိအားပေးမှုကိုပြင်းထန်စွာကြေငြာခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမြဲတမ်းအတူနေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသူကမပြောကြားပါ။
စစ်အကြောင်းပြောခြင်းကနယ်စပ်ကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်တန်ဖိုးမထားသင့်သောသင်္ကေတအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိသည်။ ဒါဟာပြည်နယ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တစ် ဦး ပြန်လာကျင်းပခဲ့သည်။ စီးပွားရေး၏ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကြောင့်အမျိုးသားအစိုးရများအနေဖြင့်အိမ်တွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့နည်းစေပြီး၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများကိုလျှော့ချခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဘ ၀ တွင်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများမှကာကွယ်ရန်မတတ်နိုင်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Corona နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံရေးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုကြုံတွေ့နေရပြီး၎င်းသည်အစိုးရများအတွက်နေရာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့အနိုင်ရချင်တဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းပြောပြီးသူတို့ဘယ်လောက်အင်အားကြီးတယ်ဆိုတာကိုကြေညာလိုက်တယ်။
အဖြေများ -“ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်စုံပြောင်းလဲခြင်း”
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအမျိုးသားအတ္တဝါဒအားလုံးသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအထောက်အကူပြုမှု၊ ဖော်ရွေမှုနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုများစွာသာမကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အထောက်အပံ့များနှင့်လည်းတူညီသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသရန်တလိုတလားရှိခြင်းသည်ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူနိုင်ငံဖြတ်ကျော်နိုင်ငံရေးအဆောက်အအုံများမရှိခြင်းနှင့်“ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာအမျိုးသားရေးဝါဒ” မရှိခြင်းသည်ယခုအခါကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းထိရောက်မှုရှိရန်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသရန်ဆန္ဒရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင် Corona အကျပ်အတည်းအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်အလားအလာကိုယနေ့ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပြည်နယ်အဆင့်အောက်ရှိဒေသများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည်လည်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေပုံရသည် - ပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရသည့်ပြင်သစ်အယ်လ်ဆေ့စ်မှလူနာများကိုအိမ်နီးချင်းဆွစ်ဇာလန် (သို့မဟုတ်ဂျာမနီ) Baden-Württembergသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။17
ဒါဟာတသမတ်တည်းလုပ်သူအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုသိသာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Corona ကိုတားဆီးရန်မူဝါဒအဆိုပြုချက်များသည်ဘီလျံနာဘီလ်ဂိတ်ဖြစ်သည်။ လူအများစု၏ (ဖေဖော်ဝါရီလတွင် (ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်မြောက်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည့်အချိန်) တွင်ဆောင်းပါးတစ်ခုပါ ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်18 ချမ်းသာသောပြည်နယ်များကပိုမိုဆင်းရဲသောသူများကိုကူညီသင့်ကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူတို့၏အားနည်းသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များသည်အလွန်အမင်းဝန်လေးနေသောဝန်များဖြစ်လာပြီးစီးပွားရေးအကျိုးဆက်များကိုခံယူရန်အရင်းအမြစ်များလည်းနည်းလာသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေးများကိုအမြတ်အများဆုံးအမြတ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းမပြုသင့်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအများဆုံးလိုအပ်သည့်ဒေသများသို့ ဦး စွာထုတ်ဖော်သင့်သည်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏အကူအညီဖြင့် ၀ င်ငွေနည်းပါး။ အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောနိုင်ငံများ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုထပ်မံကူးစက်ရောဂါများအတွက်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အဆင့်မြင့်အဆင့်သို့မြင့်မားသောအဆင့်သို့တက်ရမည်။ ဤတွင်ပြproblemနာရှိသည့်ကြယ်စုကိုဂန္ထဝင်နည်းဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့မှာဒီမိုကရေစီနှင့်လူမှုရေးတရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုသောပြည်နယ်များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ (နှင့်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားများ) နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုချန်ထားခဲ့ပြီး၊ ကျန်းမာရေးပြissuesနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိသောဘီလ်ဂိတ်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းပင်အမှိုက်များကိုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏အမြတ်ငွေဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသည်။19
ဆိုလိုသည်မှာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေကိုဥပဒေ၏အင်အားနှင့်အစားထိုးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များအတွင်းနိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီတွင်ကျင့်သုံးသောဒီမိုကရေစီမူများကိုကျင့်သုံးခြင်း မှလွဲ၍ အခြားဘာမျှမရှိပါ။
လက်ရှိအခြေအနေတွင်အမျိုးသားရေးအထူးလမ်းကြောင်းများကိုဝေဖန်ခြင်းသည်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဟုထင်ရနိုင်သည်။ သို့သော် Corona (နောက်တစ်ကြိမ်) ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များကပင် Carl Friedrich Weizsäckerနှင့် Ulrich Beck တို့ကဲ့သို့သောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်“ ကမ္ဘာ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး” ၏သဘောတရားကိုပြန့်ပွားစေခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေကိုဥပဒေ၏အင်အားနှင့်အစားထိုးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များအတွင်းနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၌ကျင့်သုံးနေသောဒီမိုကရေစီအခြေခံမူများကိုကျင့်သုံးခြင်း မှလွဲ၍ အခြားဘာမျှမရှိပါ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင့်တော်သောအဆောက်အအုံများကိုလည်းဖန်တီးရမည်။ ဂျာမန်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဟဲန်နင်းဟန်းက၎င်းကို“ နိုင်ငံရေးပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုဝါဒ” ဟုခေါ်ဆိုထားပြီး၎င်းမှာရှိပြီးသားရှိပြီးသား“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုဝါဒ” ဖြစ်သည်။20 သူက“ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးစစ်အစိုးရ၏လက်တွေ့ကျသောအသွင်သဏ္advocာန်” ကိုထောက်ခံသူတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သိပ္ပံနှင့်လူထုအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းရှိအင်အားစုများသည်ကမ္ဘာ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်“ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမြှင့်တင်ရမည်” ဟူသောအယူအဆဖြင့်ကမ္ဘာ၏ပြည်နယ်များအားဤလမ်းကြောင်းသို့ ဦး တည်စေခြင်းအားကြိုးပမ်းမှုရှိသော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသူတို့သည်နိုင်ငံရေးအရအလေးအနက်ထားမှုနည်းပါးနေဆဲဖြစ်သည်။21 ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောဖြစ်ရပ်တွင်ဆိုလိုသည်မှာကပ်ရောဂါနှင့်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ၌ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကူအညီများပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျပ်အတည်းကာလပြင်ပရှိအဆောက်အ ဦ များနှင့်ယန္တရားများကိုတီထွင်ရမည်၊ သို့မဟုတ်သော WHO ကဲ့သို့သောအဆောက်အ ဦး များကိုအားဖြည့်ရမည်။ ဤသည်အတွက်“ လူတိုင်းမိမိကိုယ်ကို” တုံ့ပြန်မှုကိုအမှန်တကယ်ကျော်လွှားရန်အတွက် sine qua non ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အီဘိုလာရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်သတိပေးချက်သည်လာမည့်ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားမှီမည်သည့်အချိန်၌မည်သည့်အချိန်၌ဖြစ်သင့်သည်ဟူသောမေးခွန်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။22
သင်ယူခြင်း -“ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာရှိခြင်း”
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့မဆင်ခြင်ဘဲမနေခဲ့ပါ။ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းနှင့်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကြိုက်နှစ်သက်နေစဉ် အနာဂတ်များအတွက်သောကြာနေ့ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးလူများနှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များ၏စရိတ်များဖြင့်နေထိုင်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ဤမရေရာသည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်သက်ဆိုင်သောအကျိုးဆက်များကိုမဖြစ်စေနိုင်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏imperကရာဇ်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ (Ulrich Brand) ကိုအလွယ်တကူလက်မလျှော့ချင်ပါ။ သို့သော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်လက်ရှိကပ်ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုဆီသို့ ဦး တည်စေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ကြစဉ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတူတကွလုပ်ဆောင်ဖို့လိုတဲ့နားလည်မှုဟာအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ ကပင် Milan Kundera သည်“ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး” ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုဆန့်ကျင်ရန်သတိပေးခဲ့သည်။ ။ "23
အလားတူထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ပြင်သစ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်အက်ဒ်ဂါမိုရင်က“ သာမာန်ကမ္ဘာမြေကြီး၏ကံကြမ္မာ” နှင့်“ ဇာတိမြေမြေ” ဟူသောဝေါဟာရများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မှီခိုနေရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်ရမည်။ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးပြproblemsနာများအတွက်အမျိုးသားရေးအထူးလမ်းများမရှိတော့ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အနာဂတ်တစ်ခုရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝပုံစံ၊ စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများအပြောင်းအလဲများကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ဟု Morin ကပြောကြားခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်ပြည်နယ်များကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲတိုင်းပြည်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းအဆောက်အအုံများကိုဘ ၀ နှင့်ပြည့်စုံစေရန်မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုလိမ့်မည်။ “ သာမန်ကမ္ဘာမြေကြီး၏ကံကြမ္မာ” ကိုအလေးအနက်ထားရန်သူက:
“ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ရှိရန်၊ နေထိုင်ရန်၊ မျှဝေရန်၊ အချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်သင်ယူရန်လိုအပ်သည်။ Self- ပူးတွဲယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အမြဲထိုဉာဏ်ပညာကိုသိနှင့်သင်ပေးတယ်။ ယခုမှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏လူသားများဖြစ်ရန်၊ အသက်ရှင်ရန်၊ မျှဝေရန်၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်သင်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမှတ်အသားများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ၏နိုင်ငံသားများအနေနှင့်နိုးထရန်လိုအပ်သည်။24
အငြိမ်းစားတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဒေါက်တာ Werner Wintersteinerသူသည်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ကလီဂင်န်ဖ်တ်၊ အယ်လန် - အဒရီယာတက္ကသိုလ်ငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးစင်တာကိုတည်ထောင်သူနှင့်နှစ်ရှည်လများညွှန်ကြားခဲ့သည်။ သူသည် Klagenfurt Master ဘွဲ့သင်တန်းဖြစ်သော“ Global Citizenship Education” တွင် ဦး ဆောင်နေသောအဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည်။
1 Edgar Morin / Anne Brigitte Kern: ဇာတိမြေကမ္ဘာ။ အသစ်ထောင်စုနှစ်အဘို့အ Manifesto ။ Cresskill: Hampton စာနယ်ဇင်း 1999, p ။ 144-145 ။
3 Der Falter 13/2020, p ။ ၆ ။
၄ Cf. https://www.wired.com/story/opinion-we-should-deescalate-the-war-on-the-coronavirus/ တွင်အကျပ်အတည်းများနှင့်ဆင်တူသောအပြုအမူများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သောလူမှုဗေဒပညာရှင် Philipp Strong ကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်။
6 Steffen Arora, Laurin Lorenz, Fabian Sommavilla in: The Standard အွန်လိုင်း၊ ၁၇.၃.၂၀၂၀ ။
8 NZZ, 17 3. 2020 ။
၉ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ၊ ၁၄၊ ၃။ ၂၀၂၀၊ https://foreignpolicy.com/9/14/3/coronavirus-eu-abandoning-italy-china-aid/
10 ဥပမာ Tag Tagspiegel, ၁၉။ ၃။ ၂၀၂၀ - တရုတ်နိုင်ငံသည် Corona အကျပ်အတည်းတွင်ဥရောပ၌သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုမည်သို့ရယူထားသနည်း။
11 Martin Alioth, ORF Mittagsjournal, 17. 3. 2020 ။
12 ဥပမာအားဖြင့် www.volkshilfe.at တွင်တွေ့နိုင်သည်
၁၃ Dominik Barta: ဗိုင်းရင်း၊ ဗလိုကာ၊ ရေချ် [ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ လူများ၊ အခွင့်အရေးများ] ။ ခုနှစ်တွင်: အဆိုပါစံ, 13 20. 3, p ။ ၂၃ ။
၁၄ China Daily, zitiert nach: https://www.wired.com/story/opinion-we-should-deescalate-the-war-on-the-coronavirus/
1f https://fr.news.yahoo.com/ (ကိုယ်ပိုင်ဘာသာပြန်ချက်) ။
၁၆ မိန့်ခွန်း“ ဗိုင်းရပ်စ်အပေါ်စစ်ကြေငြာခြင်း”၊ မတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀. https://www.un.org/sg/en
17 Badische Zeitung, မတ်လ 21, 2020. https://www.badische-zeitung.de/baden-wuerttemberg-nimmt-schwerstkranke-corona-patienten-aus-dem-elsass-auf–184226003.html
၂၀ Henning Hahn: Politischer Kosmopolitismus ။ ဘာလင် / ဘော်စတွန်: De Gruyter 20 ။
၂၁ UNO Generalsekretärဘန်ကီမွန်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ သူ၏“ Global Education First” Initiative (GEFI) စတင်ခဲ့သည်။ https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/21-26-2012/secretary-generals-remarks-launch-education-first-initiative
၂၃ မီလန် Kundera - Die Kunst des Romans ။ Frankfurt: Fischer ၁၉၈၉ ။
မှတ်ချက် 24, p အဖြစ် 1999 Morin 1 ။ ၁၄၅ ။
“ သီလရှင်များ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဗုံးများ” (မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကား)
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပညာရေး - အနောက်တိုင်းဘော်လကန်ဒေသတွင်သွေးခွဲမှုကိုပေါင်းကူးပေးသည်
ဧပြီလ 8, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်၊ လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင် Ph.D. မှ Grace Brillantes-Evangelista သည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောသန့်ရှင်းသောရက်သတ္တပတ်ကြုံတွေ့ရမည့်နေရာအတွက်ရှင်းလင်းရန်အတွင်းပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုအာရုံစိုက်သောလမ်းညွှန်တရားအားထုတ်ခြင်းသို့ ဦး ဆောင်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မေလ 3, 2017 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ, ပေါ်လစီ 0
၂၀၁၇ Sပြီ ၆ ရက်မှ ၇ ရက်အထိတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဂျိုဟန်နက်စ်ဘာ့ဂ်၌ '' မဟာဗျူဟာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ခြင်း 'ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိဆာဟာရတောင်ပိုင်းအာဖရိကဒေသဆိုင်ရာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားပညာရေး (GCED) ကွန်ယက်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိကဆိုင်ရာယူနက်စကိုဒေသဆိုင်ရာရုံးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနားလည်မှုအတွက်ပညာရေး - အာရှပစိဖိတ်ပညာရေးစင်တာတို့မှပူးတွဲဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းမှာဤရည်မှန်းချက် (၃) ခုရှိခဲ့သည်။ (၂) ဒေသအတွင်းရှိ GCED အစီအစဉ်များ၏အတိုင်းအတာနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ (၃) သက်ဆိုင်သူများ၏ကတိကဝတ်များကိုသေချာစေရန်နိုင်ငံရေးအရပါ ၀ င်မှုနှင့် ဦး ဆောင်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မတ်လ 12, 2017 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
Simon Kuany (တောင်ဆူဒန်) သည်နယူးဒေလီ၊ နယူးဒေလီရှိယူနက်စကိုငြိမ်းချမ်းရေးမဟာဗျူဟာဂန္ဒီ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် (MGIEP) နှင့်အတူ UN စေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယအစိုးရ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် MGIEP ကို ​​၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ လူသားများအတွက်ပညာရေးကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယူနက်စကို၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏အထူးဌာနဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]